Professor Cali Maxamed Geedi iyo wefdi uu hogaaminayey oo ka badbaaday qarax weyn ee sababay dhaawac iyo dhimasho
Wefdi uu hogaaminayey Porfessor Cali Maxamed Geedi ayaa ka badbaaday qarax miino oo sababay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. Professor Geedi oo ku sii jeeday Guriga weyn ee dawlada "Villa Soomaaliya" ayaa gawaaridii taxanaha aheyd ee galbinayey Professor-ka mid ka mid ah miino ku qaraxday. Waxaana gaarigii siday professor Geedi iyo wasiirka Arrimaha Gudaha ahna ra’iisal wasaare ku-xigeenka Xuseen Maxamed Ceydiid uu ku sigtay inuu qaraxaasi burburiyo markii gaarigii ka horeeyey ay ku qaraxday Miino.
Warar kala duwan ayaa sheegaya in qaraxa waxyeelldada ba'an geestay aan la kala hubin in uu ahaa miino ama bam-gacmeed, hasayeeshee dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan ayey geesteen ciidamada galbineyey Professor Geedi oo ay si naxariisdarro ah ugu fureen rasaas, halkaas oo la sheegay in dadkii ku dhaawacmay loola cararay isbitaalka Madina ee ku yaala Waqooyiga Muqdisho.
Wafdiga Professor Geedi uu hogaaminay ayaa waxaa ka mid ahaa mudane Salaad Cali jeele, Mudane Cabdalla Deeroow Isaaq, Mudane Maxamed Cabdi Xayir, iyo qaar kale ee tiradooda lagu qiyaasay ilaa 19 wasiir oo ka tirsan dowlada KMG. Waxaa wararku sheegayaan in wasiiradaasi ay iskaga yimaadeen Jowhar sababtuna la xiriirto warakii uu dhawaantan saxaafada ay baahiyeen oo uu Col. Cabdullahi Yusuf ku sheegay inuusan marnaba diyaar u hayan dib-u-heshiisiin iyo dex-dexaadin dhex marta garabka ka soo horjeeda ee ku sugan Muqdisho.
Warkaas dhiillada colaadeed xambaarsanaa ee ka soo yeerey Col. Cabdullahi Yusuf ayaa dadka siyaasada Soomaaliya indha-indheeya ku tilmaameen hoos u dhac ku yimid garabka uu Col. Cabdullahi Yusuf hogaamiyo ee ku sugan Jowhar. Col. Cabdullahi ayaa hadalkiisa uu khilaafsanaa hab-diblomaasiyeedka lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo labada garab ee ku kala sugan Jowhar iyo Muqdisho.
Socdaalka uu Professor Geedi wakhti hore ku imaan lahaa Muqdisho oo uu marar badan hakiyey Col. Cabdullahi Yusuf ayaa hadda la rajeynayaa in professor-ka oo haatan ku sugan Villa Soomaaliya inuu qeyb weyn ka qaato siidii uu iskugu soo dhaweyn lahaa dadaalka lagu soo afjarayo khilaafka u dhaxeeya labada garab ee dowlada KMG, waa haddii uu helo fursad uu kula kulmi karo xildhibaanada iyo wasiirada ku sugan Muqdisho.